Akụkọ banyere akparamagwa Google Analytics: Ọ bara uru karịa ka ị ghọtara! | Martech Zone
Akụkọ banyere akparamagwa Google Analytics: Ọ bara uru karịa ka ị ghọtara!
Na Tọzdee, Septemba 22, 2015 Na Tọzdee, Septemba 22, 2015 Shane Barker
Nchịkọta Google na-enye anyị ọtụtụ data dị mkpa iji melite arụmọrụ weebụ anyị. O di nwute, anyi anaghi enweta oge ozo iji amu data a ma gbanwee ya ka o bara uru. Ọtụtụ n’ime anyị chọrọ ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji nyochaa data dị mkpa maka imepụta weebụsaịtị kacha mma. Nke ahụ bụ ebe Àgwà Google Analytics akụkọ na-abata. Site n'enyemaka nke akụkọ ndị a, ọ na-adị mfe iji chọpụta ngwa ngwa ọdịnaya gị na-arụ na omume ndị ọbịa na-eme n'ịntanetị mgbe ha hapụsịrị ebe ọdịda.
Kedu ihe Akụkọ Nchịkọta Ahụhụ Google?
Akụkụ akparamagwa akụrụngwa dị mfe ịnweta site na iji menu aka ekpe n'akụkụ nke nchịkọta Google. Ọrụ a na - enye gị ohere inyocha akparamagwa ndị ọbịa na - eleta weebụsaịtị gị. Nwere ike iwepu isiokwu, ibe, na isi mmalite iji mee nyocha gị. Can nwere ike iji ozi dị oke mkpa na Akụkọ akparamagwa iji mepụta ụzọ dị mma iji dozie nsogbu ma melite arụmọrụ saịtị gị. Ka anyị lebakwuo anya n'ihe ị nwere ike ịchọta n'okpuru Akụkọ gbasara akparamagwa:
Dị ka aha ya na-egosi, Ngalaba Nchịkọta na-enye gị nnukwu echiche foto nke ịnyagharị okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. N'ebe a, ị ga-achọta ozi na mkpokọta ibe ihu, elele peeji nke pụrụ iche, oge elele oge, wdg.
Akụkụ a na-enye gị data gbasara nkezi oge ndị ọbịa na-etinye na ibe ma ọ bụ ihuenyo. I nwekwara ike ịlele ọnụego ibiaghachi gị na pasent ọpụpụ, nke nwere ike inyere gị aka ịghọta nke ọma omume onye ọrụ weebụsaịtị gị.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Nyepụ: Nweta isi nghọta banyere omume nke ndị ọrụ gị site na mpaghara dịka PageViews, Bounce Rate, Exit Rate, Nkezi Oge Oge na Adsense Revenue. N'iji ya tụnyere ọnwa gara aga, ị nwere ike nyochaa mbọ ị na-agba n'ime oge a kapịrị ọnụ. Lelee anya ka ihu omume onye ọrụ dị mma site na ịtinye ọdịnaya ọhụrụ, ire ngwaahịa ọhụrụ, ma ọ bụ mgbanwe saịtị ọ bụla. [/ Box]
Àgwà Flow Report
The Àgwà Ọgba Àgwà na-enye gị nyocha nke ime n'ime ụzọ nke ndị ọbịa gị na-ewere iji webata weebụsaịtị gị. Akụkụ a na-enye nkọwa gbasara ibe mbụ ha lere na nke ikpeazụ ha gara. Site na ebe a, ị nwere ike ịchọta ngalaba ma ọ bụ ọdịnaya nke natara aka na nke kachasị.
Akụkụ a nke Akụkọ Omume na-enye nkọwa zuru ezu banyere otu ndị ọbịa si emekọrịta na ibe ọ bụla na weebụsaịtị gị.
All Pages - Akụkọ a niile na - eme ka ị hụ ọdịnaya kacha elu na ego ị nwetara maka ibe ọ bụla. You'll ga-enweta ngosipụta nke ibe kachasị elu na weebụsaịtị gị dabere na okporo ụzọ, echiche peeji, oge elele anya, ọnụego bounce, echiche peeji pụrụ iche, ọnụ ụzọ, uru peeji, na pasent ọpụpụ.
Ibe akwukwo - The ọdịda peeji nke akụkọ na-egosi ozi na otú ọbịa na-abanye gị na ebe nrụọrụ weebụ. Nwere ike ịkọwa kpọmkwem nke bụ peeji kachasị elu ebe ndị ọbịa na-ebute ụzọ. Ihe data na - enyere gị aka ịchọpụta peeji ndị ị ga - esi nwee ike ịgbanwe ọtụtụ ntụgharị ma na - eduga.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Nyepụ: Dị ka ị na-ahụ na onyogho a, ngụkọta oge mụbara site na 67% yana ndị ọrụ ọhụụ jiri 81.4% mụbaa Nke a mara ezigbo mma, agbanyeghị na okporo ụzọ na-esogbu oge nnọkọ. Yabụ na akụkọ a, anyị kwesịrị ilekwasị anya na igodo ndị ọrụ. Ma eleghị anya, ha enweghị ike ịnyagharịa ngwa ngwa n'ihi na saịtị gị na-enye ahụmịhe onye ọrụ adịghị mma. Site na mkpesa omume ndị a, ị nwere ike ịgwa na onye nwe ya kwesịrị ilekwasị anya na itinye aka na ndị ọrụ. Nke a ga-ebelata ọnụego ibiaghachi ma nwekwuo oge oge ịnọ. [/ Box]
Ọdịnaya ọdịnaya - Ọ bụrụ n’inwe folda folda ọ bụla na webụsaịtị gị, ịnwere ike iji akụkọ dọkụmentị ọdịnaya chọpụta ihe nchekwa dị n’elu. I nwekwara ike ịchọpụta ọdịnaya kachasị elu n'ime folda ọ bụla. Nke a na - ahapụ gị ka ị hụ ngalaba ọdịnaya kachasị mma na peeji nke saịtị gị.
Wepu Peeji - N'okpuru itzọ ọpụpụ Pages akụkọ, ị nwere ike ikpebi nke peeji nke ndị ọrụ gara na nke ikpeazụ tupu ịhapụ saịtị gị. Nke a bara uru maka ịkọwapụta atụmatụ iji meziwanye peeji ndị a na-apụ apụ. A na-atụ aro ka ị tinye njikọ na ibe ndị ọzọ na weebụsaịtị gị ka ndị ọbịa wee nọrọ ogologo oge.
Ọsọ nke saịtị
Akụkụ a nke akụkọ akparamàgwà dị oké mkpa na ọ na-enyere gị aka ịchọpụta ebe ị ga-achọ ịkwalite ebe nrụọrụ weebụ gị. Nwere ike nweta a doro anya echiche banyere ihu peeji na otu o si emetụta omume onye ọrụ. Ọzọkwa, akụkọ ahụ mara mara oke oge dị iche na mba dị iche iche na ihe nchọgharị differentntanetị dị iche iche.
Isi ọsọ ọsọ saịtị - Na n'Speedntanet Speed ​​Isi akụkọ, ị ga-ahụ a nchịkọta nke otú ngwa ngwa ọ bụla na peeji nke ibu na nkezi. Ọ na-egosiputa ọnụọgụ dị iche iche, gụnyere oge nkwụsị peeji nke oge, oge nyocha oge, oge redirection, oge nbudata peeji, oge njikọ ihe nkesa, na oge nzaghachi sava. Nọmba ndị a ga - enyere gị aka ịghọta otu ị ga - esi bulie ọdịnaya gị maka oge nbudata peeji a na oge ibupute peeji. Dịka ọmụmaatụ, mbenata nha onyonyo na ọnụọgụ nkwụnye nwere ike inye aka melite oge ibu peeji.
Oge Peeji - Iji kọọ akụkọ oge, ị ga - achọpụta oge a na - ebugharị maka ibe gị ị ga - agakarị na otu o si jiri ya tụnyere ibe ndị ọzọ. Nyochaa ibe ndị nwere oge nnabata dị elu, yabụ ị ga - arụ ọrụ iji bulie ndị ọzọ otu.
Aro Ngwa - N'akụkụ a, akụkọ Omume na-enye ndụmọdụ bara uru site na Google gbasara njikarịcha nhọrọ ị nwere maka ibe saịtị ụfọdụ. Malite idozi nsogbu ọ bụla na ibe ndị na-enweta ọtụtụ okporo ụzọ tupu ị gaa na ibe ndị ọzọ. I nwekwara ike ileta Ngwa ngwa Google Page iji chọpụta aro maka ime ọsọ ọsọ na ibe ụfọdụ.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Nyepụ: Ọsọ peeji bụ isi ihe njin njin ọchụchọ. Ihe obula nke obula igbu oge na - ebute 7% ntughari ala. Idozi nsogbu nsogbu nwere ike ime ka ntụgharị gị belata ma belata ọnụego agbahapụ. [/ Igbe]
Oge njirimara - Site na akụkọ Onye Ọrụ Oge, enyere gị ohere bara uru iji tụọ ọsọ ọsọ nke ihe akọwapụtara na ibe. I nwekwara ike ikpebi ma nke a na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Nke a bụ akụkụ dị ịtụnanya nke Akụkọ gbasara omume Google Analytics ebe ị nwere ike nweta nghọta na igbe ọchụchọ gị. May nwere ike ikpebi etu esi eji igbe ọchụchọ gị yana ajụjụ ndị ọrụ na-ede. Mana, tupu i jiri akụkọ ahụ, ịkwesịrị ime ka bọtịnụ "Ndepụta Nchọgharị saịtị" na Ntọala Ọchụchọ saịtị. Enwere ike ịchọta ya n'okpuru ngalaba Admin na n'elu igodo. Naanị ịkwesịrị ịgbakwunye oke nyocha ọchụchọ n'ọhịa dị ka egosiri n'okpuru onyonyo iji mee nsuso ahụ.
Isi nyocha saịtị - Site n'enyemaka nke Nchịkọta Nchọgharị n'Sitentanet, ị nwere ike ịmụta usoro ọchụchọ ndị ọbịa jiri. Akụkọ akparamagwa ndị a gosipụtara usoro dị iche iche, dịka nchụpụ ọchụchọ, oge nchọta, yana ịdị omimi ọchụchọ. Ọ na-enyocha ihe niile ndị ọrụ nyochara na igbe ọchụchọ saịtị gị.
ojiji - Akụkụ Ojiji na-enyere gị aka ịghọta otu igbe ọchụchọ si emetụta ahụmịhe onye ọrụ. Ga-enwe ike ịchọpụta otu ịnwe igbe ọchụchọ na-emetụta ọnụego ibiaghachi gị, mgbanwe, na oge nkeji oge.
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Nyepụ: Ọ bụrụ na ị hụ na ojiji nke igbe ọchụchọ dị oke elu, mgbe ahụ ọ na-atụ aro ka ị debe igbe ọchụchọ ahụ na mpaghara ngosipụta kachasị ama iji bulie njikọ aka. [/ Igbe]
Usoro Nchọta - The Search Okwu akụkọ na-egosi gị nke Keywords ọbịa banye gị na saịtị ahụ si search igbe. Ọ na-egosiputa ọnụ ọgụgụ nke ọchụchọ na ọnụego ọchụchọ ọpụpụ.
peeji nke - N'ebe a, ị ga-enweta otu ọnụọgụ dị ka akụkọ gbasara Usoro ọchụchọ, mana enwere mgbado anya n'ịmụ peeji ndị akọwapụtara nke isiokwu isiokwu si.
N'okpuru ngalaba Ihe omume nke akụkọ, ị nwere ike soro ụfọdụ mmekọrịta weebụ, gụnyere nbudata faịlụ, egwu vidiyo, na pịa njikọ dị na mpụga. Omume nsuso bụ ogologo, usoro siri ike nghọta, mana Ntuziaka Onye Mmepụta Google emeela ka ọ dịkwuo mfe melite ma mụta ihe na.
Ihe Omume - Akụkọ banyere ihe omume gafere isi na - egosi atụmatụ nke mmekọrịta ndị ọbịa. Ọ ga-egosi ọnụọgụ nke ihe omume na uru ha bara. Nwere ike ịchọpụta ihe omume ị kwesịrị ilekwasị anya n'ọdịnihu iji melite arụmọrụ.
Ihe omume kachasị - N’ebe a ka ị ga-ahụta ihe omume nwere mmekọrịta mmekọrịta onye ọrụ. Knowingmara ihe omume kachasị ga-enyere gị aka ịmata nke ndị ọbịa gị nwere mmasị na nke ndị ọzọ anaghị enweta nlebara anya dị ukwuu.
peeji nke - Akụkọ Pages ahụ na - enye gị nghọta n ’ihu peeji dị elu nke nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị ọbịa.
Ihe Omume Na-asọ - N’ime ihe omume Flow, ị nwere ike ị soro ụzọ ndị ọbịa ga - esoro omume mee ihe.
Na mbụ, aha ndị mbipụta akwụkwọ bụ Adsense. Nwere ike ịlele data a mgbe jikọta akaụntụ Google Analytics na akaụntụ AdSense gị. Ime nke a ga - enyere gị aka ilele akụkọ gbasara omume metụtara otu ihe ahụ.
Nkwupụta Ndị Nkwusa - The Publisher Overview akụkụ na-enyere aka ịchọpụta ego gị zuru ezu sitere na Google Adsense. I nwekwara ike ịchọpụta ọnụọgụ ịpị gị site na ọnụego yana echiche gị niile n'otu nkwụsị dị mma. N'ụzọ dị otu a, ịkwesighi ijikwa peeji Adsense na Google Analytics iji lelee ụgwọ gị.
Peeji nke ndị nkwusa - N'okpuru Onye Nkwusa Peeji nke akụkọ, ị nwere ike ịhụ peeji nke na -emepụta ọtụtụ ego ha ga enweta. Gbalịa ịghọta ihe kpatara ibe ndị a ji arụ ọrụ karịa ndị ọzọ, yabụ ị nwere ike itinye otu ụzọ ahụ iji meziwanye peeji ndị ọzọ na-enweghị.
Ndị nkwusa na-ebipụta akwụkwọ - N’ebe a, ị nwere ike ịchọpụta URL na-ekwu maka ịkwanye ndị ọbịa ka ị pịa na mgbasa ozi AdSense gị. Reporttụle akụkọ ndị na-ebipụta akwụkwọ na-enye gị ohere ilekwasị anya na isi mmalite okporo ụzọ maka ezigbo uto.
Ngalaba Nleta nke Akụkọ akparamagwa na-enyere gị aka ịme ihe dị mfe A / B ule. Ya mere, ị ga-enwe ike ịhụ ọdịiche peeji nke ọdịda na-arụ ọrụ kacha mma. Ọnwụnwa ndị a na-enyere gị aka n'ịkwalite saịtị gị iji zute ihe mgbaru ọsọ ntụgharị ụfọdụ.
The Nchịkọta In-Page taabụ na-enye gị ohere ilele ibe dị na saịtị gị yana data Google Analytics. Nwere ike ịchọpụta ebe kachasị elebara anya ma gbakwunye njikọ iji nyere aka na ntụgharị ndị ka mma. Tupu, ị ga-wụnye Nchịkọta peeji nke Google Chrome ndọtị, nke na-ahapụ gị ịhụ ezigbo oge data yana pịa na ibe njikọ ọ bụla.
Ugbu a, ị hụ ka Google si enye gị nnwere onwe, nkọwa zuru ezu na arụmọrụ saịtị gị nke ị nwere ike ileghara anya. Akụkọ gbasara omume Google Analytics gosipụtara ihe omimi miri emi banyere otu ndị ọbịa si emekọrịta ma tinye ọdịnaya na saịtị gị. You na-enyo zoro ezo na peeji nke na ihe omume na-eme nke kacha mma na nke ndị chọrọ mmelite. Nanị ihe ị ga - eme ga - erite uru banyere akụkọ Omume ndị a iji bulie webụsaịtị gị ma melite mgbanwe gị.
Tags: akụkọ omumeGoogle Analyticsgoogle analytics omume akukoAkụkọ akụrụngwa google nyocha